Vaovao - Inona no fantatrao momba ny fandavahana herinaratra
Ny fandavahana elektrika dia milina fandavahana mampiasa herinaratra ho herinaratra. Izy io dia vokatra mahazatra amin'ny fitaovan'ny herinaratra ary vokatra maivana indrindra amin'ny angovo angovo.
Ny masamihafa famaritana ny fandavahana herinaratra dia 4, 6, 8, 10, 13, 16, 19, 23, 32, 38, 49mm, sns. Ireo isa dia manondro ny savaivony farany ambony an'ny boroka nolavahana tamin'ny vy niaraka tamin'ny tanjaka mahery 390N / mm2. Ny savaivony fitrandrahana ambony indrindra amin'ny metaly tsy ferrous, ny plastika ary ny fitaovana hafa dia mety 30-50% lehibe kokoa noho ireo famaritana voalohany.
Fanasokajiana sy fahasamihafana
Ny fizarana elektrika dia azo zaraina ho sokajy 3: fandavahana tanana amin'ny herinaratra, fanamafisana ny fiatraikany, ary fandavahana ny marotoa.
1. Fitaovana elektrika tanana:Ny herinaratra no kely indrindra, ary ny habaka fampiasana dia voafetra amin'ny fandavahana hazo sy amin'ny alàlan'ny fanodikodin-jiro elektrika. Ny fanodinana herinaratra amin'ny tanana sasany dia azo ovaina ho fitaovana manokana arakaraka ny tanjona. Betsaka ny fiasa sy maodely.
2. Fitrandrahana misy fiantraikany:Ny fomba fiasa misy ny fieritreretana dia misy karazany roa: karazana nify alika ary karazana baolina. Ny karazana fihenam-bidy misy karazana baolina dia misy takelaka azo ovaina, lovia raikitra, baolina vy sns. Ny takelaka mihetsika dia mifamatotra amin'ny vatan-kazo lehibe amin'ny kofehy, ary manana baolina vy 12; ny lovia raikitra dia raikitra amin'ny casing misy tsimatra ary manana baolina vy 4. Eo ambanin'ny hetsika fanosehana dia misy baolina vy 12 mihodina manaraka ireo baolina vy 4. Ny bitika vita amin'ny karbida vita amin'ny simenitra dia miteraka fihetsehana mihodina, izay afaka mandavaka lavaka amin'ny akora mora vaky toy ny biriky, biriky ary beton. Esory ny hoho, ataovy mihodina ny lovia raikitra sy ny lovia mpanaraka raha tsy misy ny fiantraikany, ary azo ampiasaina ho toy ny fandefasana herinaratra mahazatra.
3. Fitrandrahana tantanana (tantanana herinaratra): Izy io dia afaka mandroraka lavaka amin'ny akora sarotra isan-karazany ary manana ny fampiasana faran'izay betsaka.
Ny vidin'ireto karazana karazana fandavahana herinaratra telo ireto dia nalamina hatramin'ny ambany ka hatramin'ny avo, ary miakatra mifanaraka amin'izany ny fiasa. Ny fifantina dia mila atambatra amin'ny sakany sy ny fepetra takiny.
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny fandavahana herinaratra, ny fandavahana misy fiatraikany, ny fandrefesana tantanana ary ny fisafidianana elektrika.
Ny fantsom-pahefana elektrika dia miankina fotsiny amin'ny motera handroaka ny fitaovam-pandefasana hampitombo ny tanjaky ny fantsom-panafody, mba hahafahan'ny vongan-tsolika manaparitaka amin'ny alàlan'ny vy, hazo ary fitaovana hafa.
Rehefa miasa ny drill de effets, misy fomba roa hanitsiana knob ao amin'ilay chill chill, dity azo ovaina ary drill impact. Saingy ny boribory misy fiatraikany dia mampiasa ny kodiarana eo amin'ny vatan'ny anatiny mba hitsambikina mba hahatratrarana ny fiantraikany, ary ny herin'ny fiatraikany dia ambany lavitra noho ny an'ny tantanana herinaratra. Izy io koa dia afaka mandavaka beton nohamafisina, saingy tsy tsara ny vokany.
Tsy mitovy ny fandotoana tantanana (tantanana herinaratra). Mampiasa ny maotera any ambany izy ireo handroahana amboaran-tsarimihetsika roa. Ny sety iray dia mahatsapa ny fandavahana ary ny iray kosa mametraka ny piston, izay toy ny kapoka azo avy amin'ny motera, miteraka hery mahery vaika. vokany. Ny hery dia afaka mizara vato sy mizara volamena.
Ny fisafidianana herinaratra dia ny famelana ny motera ilay dongona mihazakazaka hihazakazaka amin'ny fomba fitohizan-tany, mba hisy vokany amin'ny tany ny pick. Ny paompy hydraulic hidina dia mampiasa ny tsindry entona ampidinin'ny compresseur rivotra hamelezana ny maratra paompy ao anaty paompy elektrika hivoahana etsy sy eroa, amin'izay dia mamokatra ny vokatry ny paingotra pick mamely ny tany, fa ny paingotra elektrika fotsiny dia ny lohana sy ny lohany mifantina. tsy mihodina.
Amin'ny ankapobeny, ny fandavahana herinaratra dia tsy mahavita mandavaka fotsiny, ary ny fitrandrahana kibo dia mety hisy vokany kely ihany koa. Ny fandavahana ny marotoa dia afaka mandroraka sy mamoritra ambony, raha ny famonoana herinaratra kosa dia tsy azo atao fotsiny.